Manala panda ny lafarinina sy ronono manta | Univers féminin et de la Mode à Madagascar
Manarina ny tarehy pandaina sady manasitrana tsikelikely ny hoditra nisy izany ny fanosorana lafarinina sy ronono manta eo amin’ilay tasy. Mila averina matetika be anefa izy ity, mba hahita vokatra ao anatin’ny tapa-bolana.
Lafarinina 2 sotro fihinanana
Ronono manta 3 sotro fihinanana
Fanomanana sy fampiasana azy
Afangaro ao anaty vilia jobo kely ny ronono manta sy ny lafarinina. Kendrena mba hahazo paty marihitra tsara, ka raha tsy ampy ilay ronono dia azo ampiana kely. Izy marihitra tsara iny no ampiasaina amin’ny tarehy misy panda, amin’ny alalan’ny vovon-dandihazo. Mialohan’ny hanosoranao tanteraka ireo faritra rehetra dia ampahany ihany aloha hosorana azy, ary andraso mandritra ny 5 minitra. Raha tsy mangidihidy, mamaivay, na misy fambara hafahafa, dia zakan’ny hoditrao izay ity fangaro ity ary azonao ahosotra manontolo amin’ireo panda. Avela hilona 20 hatramin’ny 30 minitra eo amin’ny tarehy, vao kobanina amin’ny rano matimaty. Arahina menaka manamandina izany avy eo.
Raha tianao ny hahita vokatra vetivety dia mila averina in-3 na in’4 isan’andro ity fomba ity, ary tsy ajanona raha tsy efa hita fa nandaitra tsara.
Torohevitra nalaina tao aminy pejy FB an’i Conseil et Partage
Inona ny zavatsoa azo avy aminy Gombo ?